SKU: 55-06-1. Category: Ihe nkuzi
Molekụla Formula: C15H11I3NNaO4
Ọbara arọ: 672.96
T3 ntụ ntụ na-adịkarịghị edepụtara n'onwe ya iji dozie nsogbu thyroid; a na-edekarị ya na T4. N'oge gara aga, cytomel bụ ọgwụgwọ maka oke ibu; Otú ọ dị, mmụba nke nsogbu obi na nsogbu nchekasị na-eme ka a wepụ T3 maka ngwa ahụ.
Nke a bara uru ndị na-ahụ maka na ha nwere ike ịnweta nnukwu calorie tupu ha emee ihe oriri n'ihi na ha ga-aṅụ calorie caro na ọnụ ọgụgụ dị elu. Mana cheta, T3 bụ catabolic (ị nwere ike ịfe ụda akwara) na iji ogologo oge mee ihe nwere ike ibelata oke njiri.
Cytomel (CAS 55-06-1) kachasị mma ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Ọkwa nke T3 ga-akawanye elekere 2 awa mgbe ọ nwụsịrị, a ga-emezikwa ya n'ime oge 4. Iji bulie T3 na ntanetị nke T3 n'ogologo ụbọchị, ọtụtụ nkwụsị bụ usoro omume nke akwadoro.
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ụbụrụ ejiriwo ọgwụ a jiri n'enweghị nsogbu. E nwere akụkọ banyere ndị nwere nsogbu na gland thyroid gland bụ "mechie" mgbe T3 jiri. Site n'inyocha akwụkwọ ndị ahụ, ọ na-egosi na nkwụghachi bụ ihe omume kachasị njọ, ma ọ bụrụ na enweghị mkpụrụ ndụ predisposition maka ọrịa thyroid.
A na-ekwu na mmetụta a bụ T3 (CAS 55-06-1) nke na-arịwanye elu nke insulin dịka ụbụrụ nke na-eme ka ụbụrụ dị irè, si otú a belata njirimara nke 1 (5) nke bioavailability. Mkpụrụ hormone nke na-eto eto enweworị àgwà na-ere ọkụ na ya, n'ihi ya, o yiri ka ọ na-aba uru karịa iji T3 na GH n'otu oge.
T3 ntụ ntụ Ezi ntụziaka (CAS 55-06-1):
Ntinye aka Cytomel / T3 na Ogo Ogo?